Kitra: nanolotra 10 tapitrisa Ar ho an’ny Barea i Hery Be | NewsMada
Amin’ny maha olon-tsotra tia sy mpankafy ny baolina kitra azy, tonga nijery sy nanohana ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara, hiatrika ny “Lalaon’ny Nosy”, Rasoamaromaka Hery (Hery Be), fantatra amin’ny fanamboarana kianja synthètique. Nanome lelavola 10 tapitrisa Ar ho an’ireo mpilalao ny tenany, omaly tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. “Kely izany fa noho ny fitiavana ny Barea sy ny taranja baolina kitra, manampy anareo ny tenako”, hoy izy. Nomarihiny fa tsy vao izao akory ny tenany ny ao anatin’ity tontolon’ny baolina kitra ity fa efa hatrizay satria efa nitondra klioba ary efa mpitantana mihintsy ka tsy mba anisan’ireo lazaina fa mijapy masinina mandeha.
Nohararaotiny ity fotoana omaly ity namaliana ireo olona mitabataba sy mifanenjika any anaty tambajotran-tserasera. “Aleo mifaninana aty amin’ny fanampiana ny Barean’i Madagasikara fa tsy hifaratsy sy hifanenjika any anatin’ireo tambajotran-tserasera ireny”, araka ny filazany.
Notsiahiviny ihany koa fa fotoana efa ela ny nilazany fa ho kandidà hirotsaka hofidina ho filohan’ny federasiona ny tenany, ary mbola nanamafy izany indray, omaly tetsy Mahamasina. Nampanantena sahady izy fa raha ho lany amin’izany toerana izany, hanao izay haha matihanina ireo mpilalao malagasy, ary hampitomboina ny fanampiana ny vola hampiroboroboana ny baolina kitra eto an-toerana.
Tsiahivina, fa i Maorisy no hidona voalohany amin’ny Barean’i Madagasikara eo amin’ity “Lalaon’ny Nosy” ity.